ဖိုးလပြည့်ရဲ့ သီချင်းသစ်မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အကယ်ဒမီ လွင်မိုး – PannPwint
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေရဲ့ မြေးဖြစ်သူ ဖိုးလပြည့်က ကာဗာသီချင်း အမ်တီဗွီတွေ တစ်ပုဒ်ပြီး တစ်ပုဒ် ဖန်တီးလာရာမှာ ဒီတစ်ခါ ထွက်မယ့် သီချင်း အမ်တီဗီမှာတော့ မင်းသား လွင်မိုးနဲ့ ရဝေအောင်တို့လည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Do You Know? လို့ အမည်ရတဲ့ သီချင်းကို ဖိုးလပြည်က ပြန်လည်သီဆိုထားတာဖြစ်ပြီး ဒီသီချင်းနမူနာကို ဒီနေ့ပဲ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ တင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖိုးလပြည်က ဒီသီချင်းနဲ့ပါဆိုရင် သီချင်းလေးပုဒ်ရှိလာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းတိုင်းကို သူကိုယ်တိုင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးနှစ်ပုဒ်မှာတော့ သူကိုယ်တိုင် ဆိုလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းသီချင်းများမှာ ခင်ဝင့်ဝါ၊ ပိုင်ဇေရဲထွန်း စသူတို့ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ မြန်မာပြည်သိန်းတန် ပါဝင်ထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ယခု Do You Know? သီချင်းကိုတော့ အဟော့စားရိုက်ကူးထားတယ်လို့ ယူဆရပြီး လွင်မိုးပါဝင်ထားတဲ့ အခန်းကလည်း ဟော့နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ချောမောတဲ့ မော်ဒယ်တွေနဲ့ သရုပ်ဆောင် ယွန်းမီမီကျော်လည်း ဘီကီနီဝတ်စုံကို အလန်းဆုံးဝတ်ပြီး ပါဝင်ထားပါတယ်။
ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးဟောငျး သနျးရှရေဲ့ မွေးဖွဈသူ ဖိုးလပွညျ့က ကာဗာသီခငျြး အမျတီဗှီတှေ တဈပုဒျပွီး တဈပုဒျ ဖနျတီးလာရာမှာ ဒီတဈခါ ထှကျမယျ့ သီခငျြး အမျတီဗီမှာတော့ မငျးသား လှငျမိုးနဲ့ ရဝအေောငျတို့လညျး ပါဝငျသရုပျဆောငျထားကွတာကို တှရေ့ပါတယျ။ Do You Know? လို့ အမညျရတဲ့ သီခငျြးကို ဖိုးလပွညျက ပွနျလညျသီဆိုထားတာဖွဈပွီး ဒီသီခငျြးနမူနာကို ဒီနပေဲ့ သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှကျစာမကျြနှာမှာ တငျလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
ဖိုးလပွညျက ဒီသီခငျြးနဲ့ပါဆိုရငျ သီခငျြးလေးပုဒျရှိလာပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ သီခငျြးတိုငျးကို သူကိုယျတိုငျ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ပွီး နောကျဆုံးနှဈပုဒျမှာတော့ သူကိုယျတိုငျ ဆိုလာတာ ဖွဈပါတယျ။ အစောပိုငျးသီခငျြးမြားမှာ ခငျဝငျ့ဝါ၊ ပိုငျဇရေဲထှနျး စသူတို့ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျမှာတော့ မွနျမာပွညျသိနျးတနျ ပါဝငျထားတာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။
ယခု Do You Know? သီခငျြးကိုတော့ အဟော့စားရိုကျကူးထားတယျလို့ ယူဆရပွီး လှငျမိုးပါဝငျထားတဲ့ အခနျးကလညျး ဟော့နတောကို တှရေ့ပါတယျ။ ခြောမောတဲ့ မျောဒယျတှနေဲ့ သရုပျဆောငျ ယှနျးမီမီကြျောလညျး ဘီကီနီဝတျစုံကို အလနျးဆုံးဝတျပွီး ပါဝငျထားပါတယျ။
ငယ်ငယ်က သရုပ်ဆောင် လုပ်ခဲ့မိတာ နောင်တရတယ်ဆိုတဲ့ အိစိကွေး
ကလေးသရုပ်တစ်ယောက်အဖြစ် လူသိများခဲ့တဲ့ အိစိကွေးတစ်ယောက်ကတော့ ငယ်ငယ်က သရုပ်ဆောင် လုပ်ခဲ့မိတာကို နောင်တရမိတယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်။ပရိတ်သတ်အားပေမှု ရရှိခဲ့ပြီး ခုချိန်မှာလည်း အနုပညာအလုပ်တွေ ဆက်လုပ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ အိစိကွေးက ဘဝရဲ့ မွမ်းကြပ်မှုတွေအကြောင်း ဖေ့စ်ဘွက်မှာ ရေးသားလေ့ရှိပါတယ်။မနေ့ (ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်) မှာလည်း နောင်တရမိတဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း …
မြန်မာအိုင်ဒေါ (၃) တွင် မြန်မာပြည်သိန်းတန်၊ ရန်အောင်၊ တင်ဇာမော်၊ မျိုးကျော့မြိုင်တို့ ဒိုင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်
ယခု စတင်ကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ ဆီစင် ၃ မှာ အကဲဖြတ်ဒိုင်များအဖြစ် မြန်မာပြည်သိန်းတန်၊ ရန်အောင်၊ တင်ဇာမော်၊ မျိုးကျော့မြိုင်တို့က ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။မြန်မာအိုင်ဒေါ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကို ဒီနေ့ (ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်) မနက်ပဲ ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး ဒီပွဲကနေ သတင်းထုတ်ပြန် ရွေးချယ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ …
ရုပ်ရှင်နောက်ခံ တေးသီးချင်း အဆိုတော်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါက ပိုးမီး
မြန်မာအိုင်ဒေါ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပြိုင်ပွဲဝင် အဆိုတော်ပိုးပီက မြန်မာဇာတ်ကား ဇာတ်ဝင် ရုပ်ရှင်တေးသီချင်း သီဆိုပေးနေရပြီလို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာအိုင်ဒေါသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲများမှ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အဆိုရှင်များဟာ အပြင်လောကတွင် လမ်းကြောင်းတစ်ခု လျှောက်လမ်းနေနိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးပီးကလည်း မြန်မာအိုင်ဒေါ နောက်ဆုံးဆံခါတင် ရွေးချယ်သည့်အချိန်က လူသိများခဲ့သည့် အဆိုရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ အသံပါဝါ ပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုလည်း …